Nikaragòa: Tsy Mijanona Ny Tolona Ho Fampitsaharana ny Fampiasana Ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2012 4:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Dansk, 日本語, বাংলা, polski, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, Ελληνικά, English
Tsy mora tokoa ny manandrana mampitsahatra ny fampiasana ny ankizy ao Nikaragòa, mampiseho ny antony mahatonga ireo ankizy marobe mbola miasa ity lahatsary manaraka ity na dia teo aza ny fisian'ny lalàna vaovao . Raha maro ireo fianakaviana no mahatsapa ny lanjan'ny fampianarana ny ankizy ka mamaly ny hetsika fanentanana, ho an'ny hafa kosa, ny fampiasana ny ankizy no fomba iray hamelomana ny fianakaviana.
Raha mametraka ny lalàna fa ny governemanta, ny mpampiasa, ny syndikà sy ny fianakaviana dia samy manana adidy hisoroka nyfampiasàna ankizy satria manimba ny fitomboany ara-batana sy ara-tsaina ary manakana azy ireo tsy hianatra sy handroso, noho ny fitotongan'ny toekarena ao Nikaragòa kosa, sarotra ho an'ny fianakaviana ny tsy hampiasa ny zanany sy tsy hampanao azy ireo ny raharaha ao an-tokantrano
Ankizy mpivarotra voankazo ao Ometepe Nikaragua, CCby Zach Klein
Journeyman pictures nandrakitra ny tantara ho ao anaty lahatsary fanadihadiana Hard Labour (Asa Mafy), hita amin'izany ireo ankizy manao asa mampidi-doza, raha toa kosa ka lavin'ny manam-pahefana ny fisian'izy ireny na milaza izy ireo fa tsy vitany ny mampihataka ireo ankizy rehefa hitany fa tena ilaina ny mampidi-bola ho an'ny fianakaviana :
Vondron'ankizy mipaika vato ho tonga vato kely madinika, mitera-doza ho azy ireo anefa izany satria mety hahajamba noho ny fipitihan'ny vato kely. Araka ny lalàna, tsy ara-dalàna ny fampiasana ankizy ao Nikaragòa, ka nolavin'ny lehiben'ilay toerana fikapana vato avy hatrany fa tsy misy ankizy miasa ao aminy. “Voarara ho an'ny ankizy ny miasa mipaika vato. Mampidi-doza tanteraka. Tokony handeha any an-tsekoly ny ankizy, fa tsy miasa.” Nitantara tranga samihafa i Anibal, 10 taona, efa miasa. Efa notsaboina nandritra ny herintaona teny amin'ny hopitaly izy noho ny ratra nahazo azy vokatry ny fipehana vato. “Fako kely be dia be no nilatsaka avy eny ambony ka nifatratra tamiko ary nandratra ny ranjoko.” hoy izy. Na dia teo aza ny fandavan'ny governemanta Sandinista, Nikaragoa no anisan'ny firenena mahantra indrindra ao Amerika Latina , tsy manan-tsafidy ireo fianakaviana. Niaiky i Diana Espinoza, solontena ao an-toerana avy ao amin'ny fikambanana “Save the Children” (Arovy ny ankizy) fa toe-javatra tena sarotra tokoa izao: Misy tsena iray manontolo mihitsy ahitàna asan'ankizy amin'ny sehatra maro”.
Na dia izany aza, nisy fiovana vitsivtsy natao, indrindra teo amin'ny indostrian'ny kafé. Ireo mpamboly mikasa hampiditra ny kaféany ho ao anatin'ny Tsena Mangarahara”, dia mila manaporofo fa mandeha any an-tsekoly ny ankizy ao aminy fa tsy manangona kafé. Ankizy niasa ihany koa ireo mpiasa mpanagona kafé ireo fahiny, ary na fantatr'ireo mpamboly tsara ny lanjan'ny fandefasana ny zanany any an-tsekoly fa tsy ny fampiasana azy hitady vola, nanamarika ihany koa ny vehivavy iray fa mila fandavan-tena ny fanatanterahana izany mba hanabeazana ny zanany. Na dia izany aza, tsy mora ny mamerina indray ireo ankizy any an-tsekoly, araka ny hita amin'ny tantaran'i Fabiola sy ny zanany lahy Jose, ka ao anatin'izay na dia naniry ny hampiditra ny zanany any an-tsekoly aza i Fabiola ka tsy hampiasa azy eny an-dalana intsony, nisedra olana marobe izy tao anatin'izany, ary na dia efa tafiditra an-tsekoly aza i Jose, tsy maintsy mbola hiaritra fanavakavahana noho ny maha ankizy mpiasa azy teo aloha.
Maneho ny heviny momba ny fampiasana ankizy ao Nikaragoa ireo ankizy amin'ireto lahatsary roa manaraka ireto. Amin'ny alalan'ny fampianarana mamokatra lahatsary notontosain'i Xchange Perspectives, nandalina mikasika ilay lohahevitra ireo ankizy ao amin'ny faritra Jinotega ao Nikaragoà:
Tao amin'ny Abre Tus Ojos Nicaragua, nitatitra momba ny olana ao Matagalpa, ao Avaratr'i Nikaragòa ny tanora. Tamin'ny alalan'ny resadresaka natao tamin'ny ankizy mpiasa sy ireo manam-pahefana anaty fikambanana mitolona amin'ny fisorohana ny fampiasana ankizy, fantatra fa mitovy avokoa ny antony mahatonga ny fampiasana ny ankizy. Ohatra amin'izany, matetika ny reniny sy ny zanany ihany no mandrafitra ny fianakaviana iray, arak'izany ilaina ny fidiram-bola fanampiny mba hiveloman'izy ireo, raha misy ny aretina mahazo ny reniny, ireo ankizy ireo no hany tokana afaka mitady vola mba hamelomana ny fianakaviany sy lasa olon-dehibe mandritra ny alina. Matetika ihany koa ampiasan'ireo ray aman-dreny ny zanany mba hamantarain'izy ireo izany hoe miasa izany ka mba tsy hahatonga azy ireo ho kamo tsy hanao na inona na inona. Na dia miasa mandritra ny tontolo andro aza izy ireo ka reraka vao mody an-trano, mirehareha tanteraka amin'ny fanampiany entiny ho an'ny fianakaviany ireo ankizy sy tanora ireo, ary tsy mandray izany ho toy ny “asa” na zavatra manitsakitsaka ny zony. Ny zava-bita hatreto dia ny fanohizana ny fianarana amin'ny maraina, avy eo afaka manampy ny fianakaviany izy ireo , hampandrosoana hatrany ny fanentanana ireo ankizy sy tanora mba hahalalany tsara ny zony .
Sarin’ Ankizy mivarotra voankazo ao Ometepe Nicaragua, misy tompony ny sary , Zach Klein